भोकभोकै हिंडेका पैदलयात्रीलाई बोलाउँदै खाना खुवाउँदै सर्लाहीका मनकारी दम्पती ! सेयर गरौ «
भोकभोकै हिंडेका पैदलयात्रीलाई बोलाउँदै खाना खुवाउँदै सर्लाहीका मनकारी दम्पती ! सेयर गरौ
Published : 17 April, 2020 9:24 am
सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–११ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्ग किनारमा बस्ने अमृता उप्रेती र अर्जुन मैनाली दम्पती यतिवेला अति व्यस्त छन्। भोकभोकै गन्तव्यतर्फ लम्किरहेका पैदलयात्रीलाई बोलाउँदै खाना खुवाउन उनीहरूलाई भ्याइनभ्याई छ । कोभिड–१९ को महामारी फैलिन नदिन सरकारले ११ चैतमा देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्‍यो ।
उनीहरूको सेवाबारे थाहा पाएका कतिपयले सर्लाही प्रवेश गर्नासाथ पैदलयात्रुलाई मैनाली दम्पतीले निःशुल्क खाना खुवाउने गरेको जानकारी पनि दिन थालेका छन् । काठमाडौंबाट तीन दिन हिँडेर यहाँ आइपुगेका धीरेन्द्र यादवले यसबीचमा पहिलो पटक खाना खान पाएको बताए । उनले भने, ‘मलाई त यस्तोवेलामा किन हिँडेको भनेर गाली गर्न बोलाएजस्तो लागेको थियो, तर मीठो खाना खुवाउनुभयो । उहाँहरूलाई धेरैधेरै धन्यवाद । मेरो देशमा मानवता जिउँदै छ ।’-नयाँ पत्रिकाबाट